Mabaadi’dii dacwadiisa ? Mase jiraan wax cusub oo uu la yimid?
Magaca “wahaabiyah” wuxuu markii ugu horreysey soo baxay bartamihii qarnigii 18-aad e miilaadiga, oo ku aaddan qarnigii 12-aad e Hijriga. Waxay ahayd markii ay Jaziiradda Carabta ka soo baxday dacwadii uu hoggaaminayey caalimkii Reer Tamiim ee Muxammed bin Cabdil wahaab. Caalimkaasi waxa uu ahaa hoggaamiye aad isugu hawlay wax weyna ka qabtay islaaxinta iyo hagaajinta Ummadda Islaamka oo runtii xaaladdeedu, sida aynu gadaal ka sheegi doono, ay ahayd mid in badan laga baroorto. Waxa uu raad aan la illaawikarin iyo saamayn aan yarayn ku reebay dhammaan dhaq-dhaqaaqyadii islaaxinta iyo baraarujinta ee isaga ka danbeeyey, si gaar ahna wuxuu wax uga qabtay Jaziiradda Carabta, oo uu ka aasaasay dawlad ku garab istaagtay dacwadii uu wadey. Maanta waxaynu dhulkaas ku arki karnaa raadkii uu sheekh Muxammed kaga tagey.
1. Qolada koowaad markii ay arkeen dacwadan khayrka qabta ee uu sheekhu ku baaqayo, iyo sida loogu baahanyahay, isla markaana ay ogaayeen xaaladdii ay Ummadda Islaamku ku sugnayd intii aanu sheekhu dacwadiisa bilaabin, iyo baahidii isbeddel loo qabey; ayay waxay yidhaahdeen ahlan wa sahlan. Way taageereen wayna difaaceen. Waxaana ka mid ahaa culimadii dunida Islaamka ugu caansanayd, oo aynu gadaal ka sheegi doonno magacyadooda iyo siyaabihii kala duwanaa oo ay u garab istaageen. Waxaana ka mid ahaa culimo soomaaliyeed oo aynu iyana sheegi doonno.
2. Qaarka labaad waxay ahaayeen:
Magaca Wahaabiyah Xagguu Ka Yimid?
Waxay dadka ugu sawireen in uu sheekhu yahay mid diinta beddelaya, isla markaana keenaya waxyaabo cusub oo aan horay loo aqoon. Waxay arrintaas uga faa’iidaysteen jahligii tirada badnaa ee geyigaasi daboolay. Waxay sheekha iyo Dacwadiisii u bixiyeen magacyo cusub oo ay dadka kaga cayrinayaan, sida “WAHAABIYAH” iyo “KHAWAARIJ”. Waxay qoreen buugaag iyo dhanbaallo farabadan oo ay dadka uga digayaan baraaruggan cusub. Waxay falkiyeen dicaayado iyo sheekooyin aan jirin. Waxay ku ceebeeyeen masalooyinkii sunnada iyo tawxiidka ee uu sheekhu dadka ku bararujinayey, iyagoo ka dhigay masalooyin gaar u ah “Wahaabiyo” iyo “Bidco”. Xaqiiqaduse waxay ahayd mid taas aad uga fog. Dacwadani waxay ahayd mid dadka ugu yeeraysey inay diintooda dib ugu laabtaan, iyadoo Islaamka laga sifaynayo shirkiyaatka, bidcooyinka, khuraafaatka iyo ku mintididda madaahibta ama tacasubka.
Isagoo arrintaas wax ka tilmaamaya caalimka Reer Suuriya ee aadka looyaqaan, barahana ka ah Kulliyadda Shareecada ee Jaamacadda Dimishiq Dr. Wahbah Al-Zuxeyli wuxuu yidhi: “ Haddii uu hadlo mid naseexaynaya, ama uu danqado nin daacad ah, ama uu istaago mid qiiraysan oo difaacaya sharciga Ilaahay, isla markiiba waxay caamada iyo wax ma garatadu –waana inta badane- ku tuhmayaan inuu diintiiba ka baxay ama uu gooni u baxay ama uu dabadhilif u yahay qolo kale, iyaguna waxay is moodayaan inay diintii saxda ahayd ku taaganyihiin, ama ayba hor joogayaal iyo waardiye u yihiin”
1. Waxaa jirtey koox la odhanjirey “wahaabiyah” oo qarnigii labaad ee hijriga kasoo baxday waqooyiga Afrika, halkaasoo uu ku aasaasay Cabdurraxmaan bin Cabdulwahaab bin Rustum (dhintay 190 h). Kooxdani waxay ahaayeen koox khawaarij ah, Ibaadiya ah, dadka muslimiinta ah oo dhanna ku gaalnimo xukmiyey isla markaana dagaal hubaysan ku qaaday. Culimada Maqrib iyo Undulus waxay ku xukumeen baadinimo iyo lunsanaan. Waana kooxdaas tan aad ku arkaysid kutubta culimada Reer Maqrib [Waqooyi Afrika], sida kitaabka “Al-Micyaar”.
2. In laga soo qaatay magaca sheekha aabihiis “CabdulWahaab”
Isagoo markale xaqiiqadaas qeexaya waakan caalimkii Reer Suuriya Ustaad al-Zuxeyli: “Dadaalkii adkaa ee uu Ibnu Cabdulwahaab u galay mabda’a tawxiidka, iyo sidii uu mujtamaca muslimka uga nadiifinayey shirkiga iyo Bidcada, ayaa waxaa isaga iyo kuwii raacsanaa lagu magacaabay (al-Muwaxidiin) ama (Ahlu tawxiid) … (Ahlu al-firqah annaajiyah) kuwii ka soo hor jeedayna waxay ku magacaabeen (wahaabiyiin) iyagoo sheekha ugu abtirinaya. Magacan danbe ayaana dadka ku dhex faafay… gaar ahaan Reer Yurub. Qaarkoodna wayba gafeen oo dhaqdhaqaaqan isbeddel doonka ah ayay waxay ka dhigeen mad-hab cusub oo madaahibta islaamka ka mid ah, iyagoo iska raacay been abuurkii cadawga sheekha, gaar ahaan Turkidii Cusmaaniyiinta. Qaarbaaba yidhi waa (khawaarij), qaarna waxay kala mid dhigeen (Raafidada shiicada) iyo (Baabiyada)”
Maxay Dunida Islaamku, Gaar Ahaan Jaziiradda Carabtu Ku Sugnayd Markay Bilaabanaysey Dacwadii Sh. Maxamed Cabdulwahaab?
Wixii su’aal, sixid ama saluugmo ah kusoo aaddi:
 Wuxuu Sheekh Muxamed bin Cabdul Wahaab dhashay 1115 h oo ku aaddan 1703 m, wuxuu dacwada bilaabay 1153 h oo ah 1740 m, wuxuuna geeriyoodey 1206 h oo ku aaddan 1792 m, isagoo Ummadda Islaamka uga tagey baraarug wax ku ool ah oo uu dhisayey muddo ka badan 50 sannadood. Ilaahay ha u naxariisto sheekh Muxammed.
مُجـــــدِّد الدِّينْ في القَرن الثاني عشــرْ تأليف د- وهْبَة الزُّحَيلي 
تأليف : أحمد بن محمد الونشريسي المتوفى عام 914 هـ ، بفاس بالمغرب المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب: 
مُجـــــدِّد الدِّينْ في القَرن الثاني عشــرْ تأليف د- وهْبَة الزُّحَيلي :
جاء في سنن أبي داود – رحمه الله تعالى – وفي غيرها من كتب الحديث الشريف ، قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة ، من يجدد لها دينها).
على الطنطاوي في كتابه (( محمد بن عبد الوهاب )): 